Xilliga cusub ee garoonka Burgas waxaa bilaabay Fraport Twin Star
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Xilliga cusub ee garoonka Burgas waxaa bilaabay Fraport Twin Star
“Maanta, waxaan ku faraxsanahay inaan waji cusub ka bilaabayno garoonka diyaaradaha ee Burgas.
“Maanta, waxaan ku faraxsanahay inaan waji cusub ka bilaabayno garoonka diyaaradaha ee Burgas. Fraport Twin Star labadeeda marin ee duulimaadyada hada waxay leeyihiin xarumo casri ah oo rakaab ah si loo xoojiyo tartamada caalamiga ah iyo fursadaha kobaca mustaqbalka ee warshadaha dalxiiska Bulgarian ee muhiimka ah - iyo ugu dambeyn dhaqaalaha wadanka guud ahaan, ”ayuu yiri madaxa dhaqaalaha ee Fraport AG Dr. Matthias Zieschang, oo faallo ka bixinaya terminaalka cusub ee BOJ ayaa yiri.
Fraport Twin Star Airport Management AD ayaa u dabaaldegay furitaanka rasmiga ah ee terminalkeeda cusub ee rakaabka maanta garoonka diyaaradaha ee Burgas (BOJ) ee kuyaala xeebta Badda Madow ee Bulgaariya. Hawlgallada ka socda Terminalka cusub ayaa la filayaa inay bilaabmaan toddobaadyada soo socda dhexdooda. Marka lagu daro garoonka diyaaradaha ee Burgas, Fraport Twin Star - oo ay iska leedahay badankeeda Fraport AG - waxay kaloo maamushaa garoonka diyaaradaha ee Varna (VAR) halkaas oo Terminal cusub uu ka howlgalay Ogosto 2013. Albaabka koonfureed ee loo maro gobolka Dalxiiska Badda Madow, Madaarka Burgas (www. bourgas-airport.bg) waxay soo dhaweysay ku dhowaad 2.5 milyan oo rakaab ah 10kii bilood ee ugu horreeyay 2013 - boqolkiiba 4.5 waxay kordheen sanad-ka-sannadka. Sannadkii 2012, BOJ waxay heshay wadar dhan 2.4 milyan oo rakaab ah.
Maamulaha guud ee Fraport Twin Star Management AD Aletta von Massenbach ayaa tiri: “Ayadoo ay weheliso waxyaabo badan oo raaxeysan iyo raaxeysi macaamiisheena ah, xarunta cusub ee Burgas waxay siineysaa dabacsanaan hawleed aad u baaxad weyn oo looga jawaabayo xilliyada taraafikada badan iyo mustaqbalka ku biirida aaga Schengen. Hadafkeena xaruntan cusub waa inaan ilaalino dareenka fasaxa iyo inaan sare u qaadno khibrada guud ee safarka. Bulgaria waxay leedahay kala duwanaansho la yaab leh oo isugu jira soo jiidasho dabiici ah, mid taariikhi ah iyo mid dhaqameed kuwaas oo hadda bilaabaya inay ogaadaan adduunka intiisa kale. ”
Naqshadeynta naqshadaha xaruntiisu tahay Ingiriiska Halcrow Group, Pascall + Watson oo kaashanaysa SavantElbul ee Bulgaria, 21,000-mitir-laba-jibbaarada terminal waxay isku daraysaa astaamaha dabeecadda Bulgaria iyo dhismaha. Tusaale ahaan, ubax - oo ah astaan ​​qaran iyo dhaqan dhaqameed - ayaa loo isticmaalay qaabeynta. Terminal-ka waxaa lagu qalabeeyay 31 xisaab-hubin, 3 isbaaro-kaarka-lagu raaco; 9 wadiiqooyin amni iyo 8 albaab oo laga baxo. Aagga imaanshaha (oo loo kala qeybiyey aagagga Schengen iyo non-Schengen) waxaa ku yaal 12 saldhig oo laga galo socdaalka iyo 4 boorsooyin boorsooyin ah (mid dhererkeedu yahay 120-mitir iyo saddex dherer 70-mitir ah). Adeegyada rakaabka waxaa ka mid ah 800 mitir murabac oo bannaan oo loogu talo galay dukaamaysiga iyo 1,220 mitir murabac oo loogu talagalay adeegyada cuntada iyo cabitaanka. Barxad 550-mitir oo laba jibbaaran oo bannaanka ah waa xarun kale oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay rakaabka.
Waxay caan ku tahay dalxiiskeeda xeebta Badda Madow, Bulgaria waxay hadda horumarinaysaa dalxiiska sanadka oo dhan dhaqanka, barafka, golf-ka, tamashleynta iyo daaweynta dalxiiska. Iyada oo leh taariikh soo jiidasho leh oo soo jiidanaysa kumanaan sano, Bulgaria sidoo kale waxay ku faantaa hanti badan oo taariikhi ah sida Nessebar UNESCO oo ah Goobta Dhaxalka Adduunka ee u dhow Burgas (www.ancient-nessebar.com): oo la aasaasay in ka badan 3,200 sano ka hor waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn Yurub. BOJ waxay ku taal xeebta badda ee ku taal Badda Madow qiyaastii 10 kiiloomitir waqooyi-bari magaalada Burgas - isgoys weyn oo tareen iyo dekedda ugu mashquulka badan waddanka, oo iyaduna noqotay meesha ugu horraysa ee maraakiibta dalxiiska ee ku socdaalaya Badda Madow. Intaas waxaa sii dheer, BOJ kama fogeyso wadada weyn ee caalamiga ah ee E87 iyo Wadada Gaadiidka ee Trans Yurub № 8 oo isku xirta gobolada Adriatic iyo Black sea.